२०१२ मा भारतीय अर्थतन्त्रको चुनौती र सम्भावना | abc - an opinionated & politically incorect[sic] blog
२०१२ मा भारतीय अर्थतन्त्रको चुनौती र सम्भावना
Posted by His Holiness Divas the Blogger on March 8, 2012
Posted in: Divas, Nepal Blogs, Nepal Foreign Affairs.	Tagged: 2012, India Economy, South Asia Economy.	Leaveacomment
सन् २०११ मा निराशाजनक प्रदर्शन गरेको भारतीय अर्थतन्त्रमा २०१२ को प्रारम्भमा भने सुधारका सङ्केत देखा परेका छन् । खासगरी, पूँजीको बढ्दो आप्रवाह, उक्लिँदो शेयर बजार र रुपयाको मूल्यमा तीव्र सुधारजस्ता सङ्केतले भारतको अर्थतन्त्रले फेरि गति लिने आशा बढेको हो ।
भारत लगातार आठौं त्रैमाससम्म पनि विश्वकै सर्वाधिक आशापूर्ण बजारका रूपमा रहन सफल भएको उपभोक्ताको किनबेच र रहनसहन सम्बन्धी बानी अध्ययन गर्ने संस्था निएल्सनको पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएको छ । सन् २०११ को चौथो त्रैमासमा भारतको उपभोक्ता मनोबल सूचक (कन्सुमर कन्फिडेन्स इण्डेक्स) १ अङ्कले बढेर १ सय २२ पुगेको छ । भारतपछि १ सय १७ अङ्कका साथ इण्डोनेशिया र फिलिपिन्स रहेका छन् । चीन भने १ सय ८ अङ्कका साथ अघिल्लो त्रैमासको भन्दा दुई स्थानले माथि छैटौं स्थानमा उक्लिएको छ । विश्वव्यापी खपतमा कमी आए तापनि भारतको घरेलु खपतमा व्यापक वृद्धि भएकोले उसको पहिलो स्थान कायमै रहेको हो । २०१२ शुरू भएयता बम्बे स्टक एक्सचेञ्जको शेयर परिसूचक बीएसई सेन्सेक्स फेब्रुअरी १७ सम्मको हप्तासम्ममा लगातार सातौं हप्तासम्म उक्लिसकेको छ, जुन २ वर्षयताकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो ।
त्यसैगरी, भारतका ५० कम्पनी रहेको नेशनल स्टक एक्सचेञ्जको निफ्टी परिसूचकले पनि जनवरी महीनामा १० वर्षयताकै राम्रो प्रदर्शन गरेको छ । २०११ मा कीर्तिमानी न्यून बिन्दुमा पुगेको भारतीय मुद्रा रुपयामा पनि २०१२ मा बलियो सुधार आउनाले लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ । २०१२ शुरू भएयता रुपयाको मूल्य झण्डै ८ प्रतिशतले बढिसकेको छ । त्यसैगरी, भारतको महँगीदर २ वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा ओर्लेको फेब्रुअरी १४ मा प्रकाशित आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । महँगीको प्रमुख सूचक मानिने थोकविक्री मूल्य परिसूचक अर्थात् होलसेल प्राइस इण्डेक्स जनवरीमा १ वर्षअघिको भन्दा ओर्लेर ६ दशमलव ५५ प्रतिशतमा रहेको छ । खासगरी खाद्यवस्तुको बढ्दो मूल्यले २०११ को वर्षभरि नै महँगीदर दोहोरो अङ्कमा रहेको थियो ।
महँगी घट्न थालेकाले सन् २०१० को मार्चदेखि २०११ को अक्टोबरसम्म १३ पटक ब्याजदर बढाइसकेको रिजर्भ बैङ्क अफ इण्डियाले अब भने ब्याजदर नबढाउने सङ्केत गरेको छ । म्यानुफ्याक्चरिङ र सेवा दुवै क्षेत्रले गति लिन थालेका छन् । औद्योगिक उत्पादनमा पनि पुनर्बहाली भएको छ । त्यसैगरी, सन् २०११ को ११ महीनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १ वर्षअघिको सोही अवधिको भन्दा १३ प्रतिशतले र परियोजना सङ्ख्यामा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्नष्ट एण्ड योङको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यूरोप र अमेरिकाको अर्थतन्त्र अझै समस्याग्रस्त नै रहेकाले आगामी दिनमा पनि भारततर्फको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अझै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चिति जनवरी २७ मा सकिएको हप्तामा ६७ करोड ३४ लाख डलरले बढेर २ खर्ब ९३ अर्ब ९३ करोड डलर पुगेको छ । केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएअनुसार, लगातार ६ हप्तासम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ओर्लेपछिको दोस्रो हप्तामा सञ्चिति फेरि बढेको छ । साथै समुद्रपार लगानीकर्ताको लगानीसमेत बढेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको हो ।
तर, अर्थतन्त्रबारे अहिल्यै धेरै आशावादी हुनु अपरिपक्व हुने कतिपयको धारणा छ । किनभने, महँगीदर घटे तापनि त्यो खाद्य महँगीमा भएको तीव्र ओरालोले मात्र धानेको हो । गैरखाद्य महँगी नोभेम्बरको तुलनामा डिसेम्बरमा शून्य दशमलव २ प्रतिशतले मात्र ओर्लेको छ । गहिराइमा हेर्दा महँगीजन्य जोखिम यथावत् छ भने राजनीतिक गतिरोधले आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले गति लिन सकेका छैनन् । उता, मार्चमा अन्त्य हुने आर्थिक वर्षमा भारतको चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव ५ प्रतिशतनजिक पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको म्यानुप्mयाक्चरिङ उत्पादन यो वर्ष ३ दशमलव ९ प्रतिशतले मात्र बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ । त्यसैगरी, कृषि उत्पादन पनि गतवर्षको ७ प्रतिशतको तुलनामा यो वर्ष २ दशमलव ५ प्रतिशतले मात्र बढ्ने देखिन्छ ।
सरकारले पनि मार्चमा अन्त्य हुने आर्थिक वर्षको वृद्धिदरबारे अघिल्लो पुर्वानुमान ७ दशमलव ५ प्रतिशतलाई संशोधन गर्दै ६ दशमलव ९ प्रतिशतमा झारेको छ । खासगरी, अपर्याप्त पूर्वाधार, कर्मचारीतन्त्र, पारदर्शिताको अभाव, भ्रष्टाचारजस्ता समस्याले अझै पनि अर्थतन्त्रको सम्भावनाअनुरूप पर्याप्त लगानी भित्रिन सकेको छैन् । समग्रमा, विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यमा अनिश्चितता देखिए तापनि खासगरी दरिलो घरेलु माग, मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता तथा सस्तो श्रमजस्ता तइभ्वले २०१२ को शुरूमा भारतीय अर्थतन्त्रको परिदृश्य सबल देखिएको छ ।
←alittle girl asked me this morning
Thus I Started Wearing Dhaka Topi Again →